Mpanamboatra sy mpamatsy haingam-pandeha avo lenta China GZSJ
Masinina / mpiorina haingam-pandeha haingam-pandeha
Model GS series High Speed ​​Corrugated Pipe Production Line (Gear Drive) dia naka rafitra fanaraha-maso PLC, izay fiasa mora tanterahina, misy fifandraisana. Rehefa tapaka ny herin'ny milina mandritra ny famokarana dia afaka miaro amin'ny fomba mahomby ny fiarovana ireo fitaovana sy bobongolo izy io. Mampiasa làlana mihidy iray manontolo izy io handefasana lasitra, fandidiana miorina ary fahombiazan'ny famokarana avo lenta dia manome antoka ny famokarana haingana indrindra, ny hafainganana dia mety hahatratra 25 metatra isa-minitra. Ary io karazana tsipika famokarana io dia afaka miaraka amina lasitra iray misy efi-trano roa, afaka mitahiry vola be ho an'ny mpanjifa izy io.
Akora fototra: PP / PE / PA / PVC / EVA
Volavolan-tsolika: Screw tokana
TOSIKARATRA: 380V --- 440V na namboarina
Hevitra mivarotra lehibe: Mamokatra be
Fampiasana: Fampiasana be
Karazana: Masinina fanaovana fantsom-panafody
Inverter: Inverter ABB
Loko: fotsy, mainty, manga na namboarina
Output ： 40-60 Kg / H
Sokiro L / D: 30: 1
Anaran'ny marika: GZSJ
Hery: 25KW - 50 KW
Warranty: Herintaona, 12 volana
Serivisy aorian'ny fivarotana: Fitaovana maimaimpoana maimaimpoana, fanampiana ara-teknika amin'ny horonan-tsary
Karazana fanodinana: Masinina manaparitaka
Ireo toetra sy tombony azo avy amin'ny milina haingam-pandeha haingam-pandeha PP PE PA PVC mitaona fanosotra mihosin-drano
1. Famolavolana firafitra manokana amin'ny visy sy ny maty ary ny fanamorana ny fanovana ireo boloky ny bobongolo dia mamaha ny olan'ny volafotsy mora foana sy ny barral ary koa ny fahasarotana amin'ny famolahana resina plastika.
2. Ny corrugator dia mandray rafitra mihamangatsiaka rano mihidy, rojo mikatona mikatona, ary famolavolana manokana ny lalamby, izay hahatonga ny sakana rehetra hifanaraka tsara, hihazakazaka mafy. Tsy hitanao akory ny tsipika mampifandray eo ambonin'ny fantsona. Ny rano mangatsiaka dia mandeha bisikileta ao anaty corrugator, hahatonga ny hafainganam-pandeha haingana izy io, ka hampiakatra avo be ny hafainganam-pamokarana.
Mandritra izany fotoana izany, ny corrugator dia mandray ny volavolan'ny tranobe, afaka mampiasa rafitra mitovy izy ireo fa samy hafa ny halavan'ny corugator. Ny halavan'ny famolavolana lava kokoa, ny fantson'ny fantsona bebe kokoa. Azontsika atao ny mamorona mpiorina lava mifangaro arakaraka ny filàn'ny cusotmers samihafa.
Tombontsoa amin'ny haavo haingam-pandeha PP PE PA mitaingina milina fantsom-panafody
1. Amin'ny alàlan'ny fanakatonana ireo lasitra mamorona! Ka ny milina mpamorona dia afaka mihazakazaka haingana, mahatratra 15-25M / MIN. Ny bobongolo mahazatra dia mikatona amin'ny pin. Ny haingana dia matetika 8-10M /Min.PE/PA/EVA/PP milina lehibe dia miaraka amina extruder visy tokana; Ny milina lehibe an'ny pvc dia mandray extruder visy conic roa.
2.Adopts Masinina fananganana haingam-pandeha haingam-pandeha: firafitra mihidy, rohy modely amin'ny fototra fanidiana ankapobeny no mandeha mihazakazaka ao anaty tionelina mandeha.
3. Mamolavola modules: vita amin'ny vy mahery izy io, miaraka amin'ny fampiasana henjana ny fitaovana famaranana CNC novokarina mba hiantohana ny hamafin'ny sy ny marim-pototra amin'ireo maodelin'ny famolavolana. Ireo modules ireo dia mora ary mety ny manova azy
4. Coiler: Toerana tokana na toerana avo roa heny miaraka amina motera tsela.
5. Fitaovana elektrika: inverter ABB, contacteur Schneider, mpanara-maso ny mari-pana Omron sns.
Ity tsipika famokarana ity dia mety amin'ny famokarana toy izany: fantsom-pifandraisana finday mandeha ho azy, lakandrano mandeha amin'ny herinaratra, fantson-drano fanasan-damba, fantson-drivotra, fantsona teleskopika, fantsom-pisefoana ara-pahasalamana sy karazan-tsokosoko hafa sns ....
Hafaingam-pamokarana (m / min)
Herin'ny hery (KW)
1: Famonoana horonantsary plastika aloha
2: fonosana boaty hazo
Fepetra fandoavana: ny 30% napetrak'i T / T mialoha,, ny fandanjana 70% naloan'ny fandefasana.
A: Amin'ny ankapobeny dia 20-45 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola. Ny fotoana manokana dia mila miresaka momba ny daty fanaterana vaovao.
F: Ahoana no anaovanao ny teny nindramina ho an'ny mpanjifa?
A: Azafady mba omeo ity fampahalalana manaraka ity, mba hanomezanay anao ny vidiny sy ny toro-hevitray amin'ny maha mpanamboatra anay:
1. Karazana fantsona tianao hamokarana.
2. savaivony savaivony.
3. akora sy ny karazany
Raha afaka mandefa anay sarin'ireo santionanao aminay ianao dia tena ankasitrahana.
A: Fandoavana <= 1000USD, 100% mialoha. Fandoavana> = 1000USD, 30% T / T mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana entana. Raha manana fanontaniana hafa ianao, dia aza misalasala mifandray aminay.
Previous: Single Screw Extruder
Manaraka: Masinina miforona haingam-pandeha
Masinina miforona haingam-pandeha